Myanmar Local News: ရိုဟင်ဂျာ ဆိုတာ မရှိကြောင်း ပြင်သစ်နိုင်ငံသား သမိုင်းပညာရှင် (Dr, Jacques Leider) ပြော
ရိုဟင်ဂျာ ဆိုတာ မရှိကြောင်း ပြင်သစ်နိုင်ငံသား သမိုင်းပညာရှင် (Dr, Jacques Leider) ပြော
ရခိုင်၏သမိုင်းကို နှစ်ပေါင်း ၂၀ ကျော်ကြာအသေးစိတ် သုတေသန ပြုကာလေ့လာခဲ့သူပြင်သစ်နိုင်ငံသား သမိုင်းပညာရှင် Dr, Jacques Leider မှဆက်လက်ပြောကြားသည်မှာရိုဟင်ဂျာမှာ ရခိုင် တိုင်းရင်းသား မဟုတ်ပါကြောင်း...............။
ရိုဟင်ဂျာဆိုသည်မှာ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်း ပြချက်များနဲပတ်သတ်ပြီး Concept မရှိပါဘူးတဲ့။ သူတို့တွေ အနေနဲ့မတ်တပ်ရပ်ပြီးတော့ သူတို့ဟာ မြန်မာ တိုင်းရင်းသား ပါလို့ ကြွေးကြော် လို့တော့ မရနိုင်ပါဘူး။
ပြီးတော့ ဒီလိုအော်နေတာက အကောင်းဆုံးနည်းလမ်း မဟုတ်ဘူး လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ သူတို့တွေ အနေနဲ့ ရခိုင်ပြည်မှာ မျိုးဆက်တခုမက နေထိုင်လာကြတဲ့ မူစလင်တွေပါလို့ ပြောရင် တော့ ငြင်းဖို့ ခက်ပါတယ်။ ရိုဟင်ဂျာဆိုတာဝေါဟာရတစ်ခုပါ။ ရှေးဟောင်းစကားလုံး တစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့ မြန်မာနိုင်ငံ လွတ်လပ်ရေးရပြီး နောက်ပိုင်းရောက်မှ ဒါကိုအသုံးပြုခဲ့ပြီးတော့ နိုင်ငံရေးခေါင်းစဉ်တပ်နိုင်ဖို့ အတွက်တောင်းဆိုနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
အခုအချိန်အထိတော့ သူတို့အားလုံးဟာ ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းကမူစလင်တွေအားလုံးအနေနဲ့ အဲဒီ နိုင်ငံရေး ခေါင်းစဉ်တစ်ခု၏အောက်မှာ အကျုံးဝင်ဖို့အဆင်သင့်မဖြစ်ပါဘူး။ကျွန်တော်ဟာ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှကို ရောက်ခဲ့စဉ်တုန်းက ရခိုင်ပြည်ကနေ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှကိုကူးလာတဲ့ မူစလင်တွေအားလုံးကို ခင်ဗျားတိုဟာ ရခိုင်ပြည်ကလာတဲ့ ရိုဟင်ဂျာလားလို့ မေးကြည့်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ ။ သူတို့ကပြောပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့က ရိုဟင်ဂျာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့က ရခိုင်ပြည်မှာ နေထိုင်ခဲ့ကြတဲ့ ဘင်္ဂလီလူမျိုးမွတ်စ်ဆလင်တွေဟု ဆိုကြ ကျွန်တော်တို့ကို ရိုဟင်ဂျာဆိုတဲ့ စတေးတပ်ကာ ကပ်ပေးလို့မရပါဘူးလို့ဆိုခဲ့ပါတယ်။
A: My answer is that Rohingya is not an ethnic concept. Okay, they can stand up and say we are an ethnic group inside Myanmar.But I think that is not the best way. When you argue we are Muslims and we have been living in Ranki ne for several generations, nobody can deny it. For me,Rohingya is the term, which is an old word that has been claimed as above all asapolitical label > after the independence of Myanmar.For the moment,I do not see that all the people there readily submit to one andasingle label. When I was in Banglad -esh, people pointed out Muslims to me who originally lived in Rankine. They have now moved to Bangladesh and when you ask them, “ are you Rohingya coming from Rankine?” they say, “no, we are Muslims who live in Rankine, we do not take for us the label Rohingya.”
ရိုဟင်ဟူသည့်ဝေါဟာရသည် (China ကို တရုတ်ဟု မြန်မာတို့ ကခေါ်ကြသကဲ့သို)ရခိုင်ပြည်ကိုဘင်္ဂလီ များက ဘင်္ဂလီဘာသာဖြင့်ရှေးခေတ်ပသီများကနေ(ရိုဟင်)ဟုခေါ်ဆိုကြခြင်းသာဖြစ်ပြီး ဆင့်ပွားဝေါဟာ ရဖြစ်သော ရိုဟင်ဂျာဆိုသည်မှာ ရခိုင်ပြည်သားဟု အဓိပ္ပါယ်ရကြောင်း နောက်ပိုင်းမှ ရခိုင်လူမျိုးတို့ သိခဲ့ ကြရလေသည်။
ရခိုင်ပြည်သားဆိုသည့် အဆိုပါ(ဝေါဟာရသည်)ရခိုင်ပြည်သား(သို့) ရခိုင်လူမျိုးများနှင့်သာသက်ဆိုင်နေပြီး ၁၉၅၀ - ခုနှစ်၊ နောက်ပိုင်းကာလမှ ရခိုင်ပြည်အတွင်းသို့ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှများမှခိုးဝင်လာသူ ဘင်္ဂလီများနှင့် လုံးဝသက်ဆိုင်မှုမရှိပါကြောင်း သိရှိရလေသည်။၁၉၅၀ - ခုနှစ်၊နောက်ပိုင်းတွင်နည်းအမျိုးမျိုးတို့ ဖြင့် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှဒ်နိုင်ငံမှခိုးဝင်လာသူဘင်္ဂလီလူမျိုးတိုနှင့် မူရင်းနေ(ပသီတို့ )ရောနှောကာ နေထိုင်လာကြရာမှ လူဦးရေအစမတန် တိုးပွားလာခြင်းသာ ဖြစ်လေသည်။
စင်စစ်ဆိုရသော်ယခင်ကရှိခဲ့ပြီးသော ပြည်တွင်းနေမွတ်ဆင်လူမျိုးတို့ ၏ အဆိုပါလူမသိလူမသိ (ရိုဟင် ဆိုသည့်ဝေါဟာရကို)အကြောင်းပြုပြီး ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုခြေကုတ်ယူ၍ ထိုမှစတင်၍မြန်မာနိုင်ငံကို အစ္စလာမ်မစ် နိုင်ငံ ထူထောင်နိုင်ရန်အတွက် ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုစတင်ကာ အပိုင်သိမ်းဖို့ ရန် (ရည်ရွယ် ချက်ရှိရှိဖြင့်) လှုပ်ရှားလာခဲ့ခြင်းပင် ဖြစ်လေသည်။
ရိုဟင်ဆိုသည့်ဝေါဟာရကို ပညာမတောက်တခေါက်တတ်သူ (ဘင်္ဂလီ)များကနှစ်ပေါက်တစ်ပေါက်ရိုက်ကာ လှည့်စားဖို့ ရန် ရည်ရွယ်၍အသုံးပြုကြခြင်းသာဖြစ်ပါသည်။ နိဂုံးချုပ်ရသော် (ဘင်္ဂလီရိုဟင်ဂျာ လူမျိုးဟူသည့်မှာ) ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှဒ်နိုင်ငံမှခိုးဝင်လာသူဘင်္ဂလီလူမျိုးတို့ ၏ ပြည်တွင်းနေမွတ်စ်လင်လူမျိုးတို့ ပူးပေါင်းကာ (အစ္စလာမ်ဥပဒေအရ)မြန်မာနိုင်ငံအား အစ္စလာမ်မစ်နိုင်ငံ ထူထောင်နိုင်ရေးအတွက် နိုင်ငံရေးကစားကွက်တစ်ခုမျှပင်ဖြစ်သည်ဟု ရခိုင်သမိုင်းအားနှစ်ပေါင်း ၂၀ ကျော်ကြာမျှ အသေးစိတ် သုတေသနပြုကာလေ့လာခဲ့သူဖြစ်သည့် (ပြင်သစ်နိုင်ငံသားသမိုင်းပညာရှင်) Dr,Jacques Leider ဆိုသူမှ သူဤသို့ ကောက်ချက်ချကြောင်း သိရှိရပါသည်။
ပြန်လည်ဖော်ပြသူ Myanmar Local News at 2:31 PM